Ireo no Van nalaina aingam-panahy avy amin'ny mpanao hosodoko meksikana Frida Kahlo | Famoronana an-tserasera
Vans dia marika kiraro fanatanjahan-tena malaza mifantoka bebe kokoa toy ny skateboarding. Tamin'ity indray mitoraka ity dia naniry ny haka modely maromaro izy hanomezam-boninahitra an'ity mpanao hosodoko meksikana iray izay efa ary fakan-tsary ho an'ny hetsika feminista.
Tsy vao voalohany ny marika amerikana mampiasa olona malaza eo amin'ny tontolon'ny sary hosodoko. Vao tamin'ny taon-dasa dia nanaitra anay tamin'ny fiarahamiasa tamina tranombakoka Van Gogh niaraka tamin'ny kapaoty manokana; toy ny ireo fiaraha-miasa hafa ireo avy amin'ny tranombakoka iray ihany.
Tamin'ity taona ity dia ny Vault avy amin'ny Vans izay aingam-panahy avy amina fanangonana zavakanto, afaka mahita andiana modely amin'ny kirarony misy ny sarin'ilay malaza isika Frida Kahlo, mpanao hosodoko meksikana.
Ary ny marina dia tonga lafatra izy ireo miaraka amin'ny sasany loko mazava tsara sy ny sarin'ilay mpanao hosodoko Meksikana amin'ny iray amin'ireo maodely. Ny tanjon'ireto maodely Vans ireto dia ny hankalazana ny kanto sy ny fiainan'ilay mpanakanto meksikana izay nalaza tamin'ny sariny manokana sy ireo sanganasa nentanin'ny natiora.
Misy maodely telo izay nahazo aingam-panahy Sanganasan'i Kahlo ary anisan'izany ireo Las Dos Fridas nolokoina tamin'ny 1939 ary amin'ny maodely OG Sk8-Hi LX avy amin'ny Vans. Ny maodely roa hafa dia ny OG Authentic LX izay ahitanao ny fanontana ny melon avy amin'ny asan'ny Viva la Vida an'i Khalo, ary ilay maodely hafa OG Slip-On LX hankalazana ny sary hosodoko Self-Portrait miaraka amin'ny Thorn Necklace ary Hummingbird an'ny 1940 .
about modely tena kanto izay mamela antsika hitondra ny tongotsika ho an'ny mpanakanto meksikana manan-danja indrindra amin'ny hosodoko. Fotoana tsara anaovana fanomezana na hividianana Van sasany, tsy mora vidy mihitsy, aingam-panahy avy amin'ny tontolon'ny zavakanto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Vans aingam-panahy avy amin'ny mpanao hosodoko malaza Frida Kahlo
Toy izao no nanamboaran'i Google ny lohahevitra maizina ho an'ny fampiharana Android maromaro